Fisorohana ny lefakozatra :: Vitsy ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany hatao vaksiny • AoRaha
Fisorohana ny lefakozatra Vitsy ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany hatao vaksiny
Misy ireo ray aman-dreny manda ny hanaovana vaksiny miaro amin’ny lefakozatra ao anatin’ny fanentanana Fav Polio, andiany fahadimy ambin’ny folo. “Tsy mazava amiko mihitsy ity vaksiny maimaim-poana atao misesisesy ity. Fony mbola kely ny zanako no efa nisy fanaovana vaksiny faobe miaro amin’ny polio toy izao. Tsy fantatra intsony ny antony hanaovana azy matetika loatra. Manahy aho sao hanimba ny fahasalaman-janako any aoriana ka aleoko tsy hatao intsony izy”, hoy Randriamanantena Zo, renim-pianankaviana monina eny Isotry,omaly.
Fantatra fa noho ny fandavan’ireo ray aman-dreny sasany dia mbola ambany ny tahan’ireo zaza vita vaksiny miaro amin’ny lefakozatra io nandritra ny andro voalohany teto an-drenivohitra. Manodidina ny 30% ny taha ho an’Antananarivo renivohitra, araka ny tatitra avy tompon’andraikitra misahana ny fanaraha-maso.
Antony misakana ireo ray aman-dreny tsy hanao vaksiny ny zanany ny tsy fahafantarany ny hamerimberenana ny vaksiny fiarovana. “Sanganehana ireo ray aman-dreny manoloana ny fiverimberenan’ny fanaovana vaksiny miaro amin’ny lefakozatra. Hamafisina ny filazana fa fanamafisana ny hery fiarovan’ny zaza no anton’izany .Tsy misy fiantraikany ratsy ho an’ny zaza velively”, hoy ny Dr Randrianaly Lantonirina, mpitsabo mpanara-maso eto Antananarivo renivohitra, omaly.
Hisy ny fidinana ifotony hataon’izy ireo miaraka amin’ny tompon’andraikitra mba hanentanana ny olona hitondra ny zanany hanao vaksiny. “Olana amin’ny tsy fahavitan’ny vaksiny ny mbola fahalotoan’ny tanàna izay varavarana hifindran’ny tsimok’aretina”, hoy ny fanampim-panazavan’ny Dr Randrianaly Lantonirina. Marihina fa tanjon’ny minisitera ny hahatratra hatramin’ny 95% ny tahan’ireo zaza vita vaksiny amin’ity andiany fahadimy ambin’ny folo ity.
Asa any ivelany :: Hojerena antsipiriany ny fifanarahan’ ny mpampiasa sy ny mpiasa
Fitakian’ny mpampianatra :: Manaitra ny minisitera handoa ny tambin-karamany ireo mpanabe